Ny tena nahatsikaiky tamin’izany dia efa nisy sahady feo re siosio nandeha mikasika anay. Nisy namana sasany na mpiara-miasa nanontany ireo anadahy sy rahavaviko raha miaraka tokoa izaho sy i René. Vetivety dia tonga hatrany amin’ny boky aman-gazety rehetra ilay feo. Nisy mihitsy ireo naka ny hevitryny mpamaky momba izany. Marobe no tohina mafy noho ilay taonanay nifanelanelana be, tao koa ireo nieritreritra fa fanararaotam-pahefana no ataon’i René amiko satria nanampatra ny maha mpikarakara manokana ahy azy izy.
Tsy niresaka momba ireny siosion-dresaka ireny tamiko mihitsy anefa i René. Taty aoriana vao fantatro fa nanohina azy mafy ireny. Noho ireny resaka nandeha ireny dia nanjary lany andro izahay, andro izay tokony ho nifampizaranay fitiavana. Tsy nanamora zavatra koa ireny sisosion-dresaka ireny ho ahy. Nitombina anefa ny resaka nandeha, fara-faharatsina, marina tamin’ny antsasany. Tena tia mantsy aho, tia tanteraka an’i René. Mba nitia ahy koa izy, tamin’ny fombany. Fantatro izany, tsapako izany, hitako izany, fa indrindra, niriako mafy izany. Rehefa tafaraka izahay dia variana i René, tena talanjona mihitsy izy amiko. Tsy nijery na iza na iza afa-tsy izaho izy. Nijery ahy foana mihitsy izy. Dia izahay roa irery sisa no eto an-tany na dia nisy olona roapolo aza nanodidina anay.
Na tany amin’ny trano fandraisam-peo, rehefa mihaino ny hira vao noraiketiko izahay, na tany amin’ny trano fisakafoanana tany Montréal sy Parisy, dia nifanakaiky hatrany izahay no nipetraka, tena akaiky. Izahay roa ihany no tena nifampiresaka, tsy niraharaha na iza na iza. Matetika koa izahay no miara-mitokelaka. Mazana aho no miankina aminy, apetrako eo ambonin’ny sorony ny lohako. Nihevitra aho fa tsy hisy handray izany ho zavatra hafa. Tena nisy ambadika anefa ny fihetsiko taminy. Toa nandray anjara tamin’ilay kilalaoko koa i René ary tsapako mihitsy aza fa nahafinaritra azy izany. Nazava be fa tiany ny miaraka amiko. Nino tanteraka aho fa tia ahy koa izy, saingy niady mafy izy mba tsy ho tafalatsaka ao anatin’ilay fitiavana.